Iisampulu, ixesha phambili malunga neentsuku ezisi-7. Kuba imveliso mass, ixesha phambili iintsuku 7-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo asebenza xa (1) siyifumene idiphozithi, kwaye (2) sinemvume yakho yokugqibela kwiimveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu akhokelayo awasebenzi nomhla wakho wokugqibela, nceda uye kwiimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.